"Dhulgariirkii qarniga" ee soo socda ayaa ka dhici kara Chile | Saadaasha Shabakadda
Dhulgariirkii xigay qarniga »wuxuu ka dhici karaa Chile
Meerahu wuxuu ku jiraa horumar isdaba-joog ah. Qaybaha halxiraalaha waaweyn ee ka kooban, waxa aan ugu yeerno saxanka tectonics, way socdeen tan iyo markii ficil ahaan bilowgii waqtiga. Tani waa wax bini'aadamka ay tahay inuu la noolaado. Maalin kasta dhulgariirro badan ayaa adduunka ka dhaca; nasiib wanaag, in yar ayaa la dareemayaa.
Mid ka mid ah burburka suurtagalka ah ee qarnigan ayaa ka dhici kara Chile, dal ay caadi ka tahay in kuwa ugu daran ay dhacaan.
Koox ka kooban saynisyahano reer Chile iyo Faransiis ah ayaa go'aankan ku gaadhay daraasad lagu daabacay joornaalka "Waraaqaha Sayniska Dunida iyo Planetary" "Dhulgariirkii qarniga" ee soo socda wuxuu ka soo bilaaban karaa magaalada Valparaíso, oo qiyaastii boqol kiilomitir u jirta Santiago de Chile. Cabirka ugu yar ee 8,3 dhibcaha miisaanka 'Richter scale', waxay u noqon kartaa dhacdo si gaar ah khatar ugu ah kuwa hadda ku sugan dalka.
Chile waa waddan ay ka dhacaan dhulgariirro waxyeello u geysata si isdaba joog ah. Taariikhdeena dhow, waxaa xusid mudan tii dhacday Meey 22, 1960 magaalada Valdivia, oo cabirkeedu ahaa 8,5, Maarso 11, 2010 gudaha Pichilemu, sidoo kale cabirkiisu yahay 8,5 dhibcaha miisaanka Richter, ama Sebtember 16, 2015 gudaha Coquimbo oo cabirkeedu yahay 8,4. Laakiin maxaa dad badan loogu soo saaray qaybtan adduunka?
Jawaabta su’aashan laga helay taarikada tektikada laftooda, gaar ahaan, saxanka Nazca iyo Koonfurta Ameerika. Kii ugu horreeyay ayaa ka hooseeya kii labaad qiyaastii qiyaastii saddex inji sanadkii, sidaa darteed farqiga u dhexeeya 4,5 mitir ayaa soo baxa kaas oo magdhow la siiya 70kii sanaba mar, oo sababa dhulgariirradan halista ah inay soo baxaan.
Si aad wax dheeraad ah u ogaato, waad sameyn kartaa halkan guji.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Saadaasha Shabakadda » Saadaalin » Dhulgariirkii xigay qarniga »wuxuu ka dhici karaa Chile
Amazon ma ka badbaadi kartaa isbedelka cimilada?